Imisebenzi eDubai Recruitment etholakala eDubai nase-Abu Dhabi
Imisebenzi e-Dubai Recruitment - Manje sesiyilanda
Imisebenzi e-Dubai Ukuqashelwa okuthengayo. Ngalokhu engqondweni, ithimba lethu, ukusiza izisebenzi ezintsha. Ikakhulu lowo onolwazi oluhle. Ukwenza isibonelo, uma ufuna umsebenzi phesheya. Futhi ukuba iminyaka eminingana yesipiliyoni. Iqembu lethu lokuqasha libheke ukukusiza. Ngasohlangothini olubi, abasebenzi phesheya. Abangase bangabi nakho okwanele. Namanje angakwazi thola umsebenzi ngokwesibonelo emkhakheni wezokuphepha. Kodwa kuzothatha isikhathi esiningi.
Sikunikeza umsebenzi e-Dubai!
Chofoza esithombeni ukuze ulayishe i-CV
Umsebenzi utholakala e-Dubai nase-Abu Dhabi!
Imisebenzi e Dubai Ukuqashelwa - Dubai City Company, Manje sibhalisela Dubai !. Eqinisweni, inkampani yethu inayo imisebenzi etholakalayo e-tubai nase-Abu Dhabi. Faka isicelo somsebenzi omusha ne-CV yakho ebuyekeziwe namuhla !. IDubai City ne-Abu Dhabi Ngokuvamile Ukulandela unyaka wokukhula okukhulu ngezikhala eziningi zomsebenzi. Ngaphansi kwalezo zimo, I-Emirates yathuthuka ngamanani kawoyela. Lezi zinsuku isifunda se-GCC sesiqala ukuphatha Imisebenzi emihle kakhulu yezindleko futhi wethula izinhlelo ezikhethekile kwabangaphandle.
Ekuhlaziyeni kokugcina, iqembu lethu setha ukufuna umsebenzi uhlelo lokuqinisa ukukhula amathuba okuthola amathuba emisebenzi kanye nemisebenzi. Njengoba sinikeziwe la maphuzu, sinenqubo elinganisiwe yokudala imisebenzi emisha wonke umuntu ofuna umsebenzi ku-2018.
Kuze kube manje, i-Dubai City Company ithatha inhlolovo yabaqashi abangaphezu kwe-950 ngaphesheya kwe-United Arab Emirates. Ngakho-ke ngaphambili, sizenzele izeluleko ezithile Imisebenzi eDaily for Indian.
Izinkampani eziningi kudalwe ukunwetshwa kulo nyaka eDubai, ngamafemu ambalwa amangalisayo wokuhlela ukusikeka komsebenzi.
Umsebenzi wokwakha ngaphakathi kwemikhakha yamafutha negesi namanje ekhula eSharjah Dubai, kodwa kancane kancane e-Abu Dhabi.
phezu 35,000 Izinkampani e Dubai kukhona ukuqashelwa kwamathuba emisebenzi kanye nezinhlangano zokuqasha.
Sinikeza Imisebenzi e-Dubai Ukuqashwa kwezidingo neDaily City Company.
Imisebenzi e Dubai Ukuqashelwa - Dubai City Company
Imisebenzi e Dubai - umhlahlandlela ophelele wokuthola umsebenzi
Ukusebenza e-Dubai konke okuphathelene nokuphupha emsebenzini ngakolunye uhlangothi ungayithola.
Nakuba lokhu kungase kube yiqiniso uma ubheka ukuthola okusha amathuba emisebenzi e-United Arab Emirates. I-Dubai City Company inezindaba ezinhle ngawe. Kuningi imisebenzi eminingi eningi edolobheni futhi zihlukile. Kodwa-ke, kokunye, indawo yokusebenza nesikhathi sokwenza umsebenzi kungenzeka ihluke kakhulu ezweni lakini. Ukukhomba uhlelo lokusesha umsebenzi e-Dubai sibheke isihloko sethu esikubhalile phansi konke okudingayo ukwazi indlela yokuthola imisebenzi e-Dubai.
Izindaba ezinhle ezintsha abafuna umsebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi. Enye iphuzu eliyinhloko kuwo wonke umzingeli wezemisebenzi owazi kahle ikhono uthole umsebenzi okhokhelwa kahle ku-UAE. Kokunye, abantu abasanda kufika eDubai futhi ngavulelwa imibono emisha yomsebenzi. Udinga ukwazi ukuthi msebenzi muni owufunayo ukungena e-United Arab Emirates. Ngezansi ithimba lethu liveza izeluleko ezimbalwa lapho ungathola khona izindawo ezinhle kakhulu eMpumalanga Ephakathi. Lawa mawebhusayithi akwenza ukuba uthole ukucabanga okusha phezu kwezindawo eziningi ezikhundleni e-Dubai City nase-Abu Dhabi. Imisebenzi e Dubai Ukuqasha kuyisihluthulelo sakho empumelelweni eMpumalanga Ephakathi.
Thola ukubukwa okusheshayo komsebenzisi onolwazi kangcono izindawo zomsebenzi ezimakethe yomsebenzi eMiddle East. Sizama nokuba wusizo kakhulu ekunikezeni ulwazi oluyigugu lomhloli ngamunye womsebenzi. Ngokuvamile, umgomo wethu ukukukhombisa ukuthi yiziphi izinkampani ezikuyo okungcono kakhulu ukuqashelwa e-UAE.
Ngasohlangothini olubi, kukhona amasayithi omsebenzi athandwa kakhulu. Abanye babo bathandwa kakhulu, ngakho-ke uvame ukuzithola umelana namakhulu ukhetho futhi uzoba emgqeni omkhulu. Kodwa ngaphansi kwalezi zimo, ungalokothi ulahlekelwe yikho umsebenzi wokuzingela ku-WhatsApp ngoba nonke nifuna okufanayo indlela yomsebenzi eDubai City.
Inhloso yethu ukukukhombisa ukuthi ukulayisha kuqaliswe kuphi thola imisebenzi ekhokhelwayo ephezulu e Dubai. Imisebenzi e Dubai Ukuqashelwa eMpumalanga Ephakathi.
I-Job Job Portal Site eDaily For UAE kanye Nemisebenzi e Dubai?
Inkampani enemthethweni ekufuneni kwami ​​umsebenzi
# No.1 ISIKHATHI ESIKHULU - Top: Job Site for Isevisi Yomsebenzi Nezokuqasha e-UAE.
Dubai City Inkampani - Imisebenzi e Dubai - Winner Company kanye No.1 Umhlinzeki Wokunakekela e-UAE. Sibhala ngakho izinto ezenzeka e-UAE.
Indawo yase-Dubai City Inkampani yomsebenzi yiyona umdlali omkhulu emsebenzini we-market search market. Ngokuvamile, abaqashi bethu abaphezulu balapha ngokusiza abanye abafuna umsebenzi e-Dubai. Ekuhlaziyweni kokugcina, ungathola indima ebaluleke kakhulu kubaqashi njengomzingeli womsebenzi. Abaningi bethu abafuna umsebenzi kanye ukuxosha abafuna umsebenzi bavela eNdiya, Pakistan, kanye ne-Saudi Arabia. Ngakolunye uhlangothi, ukufuna imisebenzi e Dubai ngabasebenzi bokuqashwa kwezimakethe zaphesheya kwezilwandle kanye Izikhungo zamadolobha ukuthola abantu abasha, ukuqasha kanye nokusebenza imvelo eMiddle East.
Dubai City Company - Singumhlaba we-Legit weMisebenzi e-Dubai
Ngendlela efanayo, iwebhusayithi yethu inikeza Imisebenzi ephezulu yokukhokhela ukukhokha e Dubai. Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukile ukukusiza ukuthola iphupho umsebenzi. I-United Arab Emirates ingelinye lamazwe amaphupho afunwa kakhulu nacwaningwa kakhulu ngabazingeli be-International Job nabafuna umsebenzi eYurophu. I-Dubai City iyindawo engcono kakhulu yokuya kuyo futhi abaningi babo basebenzise isipiliyoni sakamuva ukuthola umsebenzi oyisisekelo embonini yokwakha.
Ngenxa yalesi sizathu, ithimba lethu lingenye okungcono ukubeka abaphathi. Kanye ne imisebenzi yokuqasha emhlabeni wonke Ithimba lethu lihlinzeka ngamathuba amaningi emisebenzi kuwo wonke amazwe e-GCC. Isibonelo, uma uneziqu emkhakheni wezentengiso unga ube ngumuntu onekhono elihle kithi. Njengomphumela wemisebenzi yethu yenkampani, sisebenzisana kakhulu ne-India, Philippines, Saudi, Qatar, Abazingeli basePakistan. Ngakho-ke, ngenxa yalokho abafuna umsebenzi ngamunye abafuna imisebenzi yabo yephupho e-Dubai. Sinikeza imisebenzi ephakanyisiwe e-UAE. Imisebenzi e-Dubai Ukuqasha nge Dubai City Company kungenzeka.
Ukuze ungachithi isikhathi sakho kufanele nakanjani ulayishe kabusha kwakho futhi zama i-Perfect fit YOKUSHINTSHA Uhlelo. IDubai City Company nayo inikezela ngezinsizakalo ezinhle zokuqashwa kwabezindaba zenhlalo. Futhi ngisho nangaphezulu. Sisebenzela eMumbai kanye naphakathi.
Imisebenzi e-Dubai - I-Dubai City Company
Singabantu usizo olukhulu lokusesha umsebenzi e-Dubai City!
Ezinye izinkampani eziphezulu ze-5 - Ukuthola izithuba zomsebenzi e-Dubai City
Amandla Amandla Nendlela Yokuphila - Inkampani yaseDubai City
Bayt - I-portal ehamba phambili ye-career e-UAE
Wonke umuntu ukhuluma ngakho kanjani ukuthola umsebenzi e-Dubai?. Into yokuqala yokukhumbula i-Bayt ingenye yezindawo ezithandwayo zomsebenzi IGulf Amazwe amathuba emisebenzi. Ukukhomba le ndawo yomsebenzi ifaka phakathi iSaudi Arabia, i-United Arab Emirates, I-Oman, Yemen, Kuwait, Qatar, neBahrain. Futhi ungakhetha nakwamanye amazwe. Izikhangiso zakwaBayt imisebenzi engenakubalwa inikeza cishe nsuku zonke.
Ubufakazi obunamandla obukhulu uma ungomunye walabo onzima imisebenzi yokusesha expats. Ngokuvamile, kufanele uthumele ukuqalisa kabusha njalo ekuseni kubaqashi abasha. Ohambeni olude, kufanele ukwenze lokho njalo kusihlwa ngethemba lokubona isikhundla samaphupho akho. Le portal ibuye ikalwe kakhulu ngemisebenzi eDubai for Indian.
Iningi lalaba abafuna umsebenzi thanda i-UAE ngoba lokho kungashintsha impilo yakho. Ngenxa yalenkampani yaseDubai ezikhungweni zomsebenzi ze-UAE zomsebenzi zemisebenzi emisha ubusuku nemini. Ngakho-ke izikhala zabo zomsebenzi ezinhle zisebenza e-UAE. Ngasohlangothini olubi ngoba zinkulu ukuze uzoba nazo thola amathuba kuwo wonke ama-Arabia. ENyakatho Afrika ngisho nePakistan neSri Lanka. Kepha lolu hlobo amathuba emisebenzi akulula ukuthola.
Okuvamile - Enye yezindawo ezinhle kakhulu zokusebenzela emsebenzini
Ngalesi sikhungo somsebenzi, ngokumangazayo ungakha kabusha ukuvuselelwa kwakho kobuchwepheshe. Ukuze uyibeke ngenye indlela, masinyane wadala iphrofayela yobuchwepheshe izokusiza usebenzisa umakhi we-GulfTalent CV. Ngalesi sizathu, sebenzisa i-CV yabo nefomethiwe efanelekile ngokuzingela kwakho kwemisebenzi noma kukuphi. Bona futhi ezinye ze-CV eziyisampula kwiwebhusayithi yabo.
I-Gulf-Talent yi-Dubai-based based recruitment job site portal. Lokhu Inkampani yase Dubai ubhala izinkampani ezikhangayo ze-4,000 ezisuka emazweni aseGulf. Ngenxa yalokho abazingeli bezemisebenzi nabaqashi abaqashiwe besebenzisa izinsizakalo zabo ukuthola ithalenta elisha. Ngamanye amazwi, kunezinye izingqikithi ezinkulu zokuqashelwa lapho, kuhlanganise neDaman, i-ADCB, ne-Etisalat.
Lokhu Dubai Ukuqashisa Inkampani unikeza imisebenzi ukufinyelela ngqo esifundeni seGulf. Noma uzothola okuningi amathuba emisebenzi eGulf uma ufuna imisebenzi ku-UAE kuphela. Unalokhu engqondweni, kukhona abaphathi abambalwa bezikhundla ezitholakalayo ongazithola bese umisa ukuphupha ngeDubai.
I-MonsterGulf - I-portal yomsebenzi wamazwe ngamazwe emazweni aseGCC
I-Monstergulf ilawula igatsha lamaqembu okuqasha amazwe. I-Monster iyi-portal yomsebenzi enobungane kakhulu. Njengoba usuke ufuna umsebenzi omusha, imisebenzi iyatholakala izinkampani eziningi zezimoto. Ngamanye amagama, i-monster gulf esiza abokufika ekwakheni nasebhange ekuthengisweni kwezezakhiwo. Lokho ukusho ngalo msebenzi kanye ikhasi lewebhu lomsebenzi kungenzeka ukuthi useshe umsebenzi ngokusebenza, isifunda noma imboni. Le sayithi yemisebenzi ibuye ibuye ivumele abasebenzisi ukuthi bakulayishe okuku-inthanethi ukuze balayishe i-CV ku-database futhi banikeze izeluleko nezeluleko indlela yokufaka isicelo e-Dubai.
I-Charterhouse - Indawo yokuqasha imisebenzi eDaily City
Le nhlangano isebenza kule Emaphakathi Mpumalanga, futhi-ke, uthola izimboni ezihlukahlukene ngaphakathi kwe-UAE. Ngendlela efanayo, le nkampani iqala ukusebenza ku-UAE kusukela ku-2004. I-Charterhouse inezikhundla ezitholakalayo kubantu abathumelayo ababukayo ngenxa yomsebenzi wabo wokuqala noma wesibili e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, izindima zabo eziningi ezenzelwe ochwepheshe abanolwazi kakhulu esikhundleni sezikhundla ezilula. Baphinde bagxile ekuphatheni okuphezulu kakhulu ukuqashwa kwezindima ze-niche nemisebenzi yobunjiniyela.
Michael Page - Imisebenzi e Dubai indawo e-UAE
Ngesikhathi esifanayo, inkampani kaMichael Ikhasi iyonke inhlangano yokuqasha abachwepheshe. Empeleni, le nkampani iqine ngokuqinile emakethe yaseDubai City. Ngenxa yalokhu, anamahhovisi emhlabeni jikelele. Noma lokhu kungaba yiqiniso iMichael Page kufaka phakathi amazwe namadolobha ahamba phambili ngenhloso yokuqasha. NjengeJapan kanye ne-Ireland ne-Australia. Ngaphezu kwalokho, bangakufaka ku ububanzi bezikhundla kusuka ekutholeni umsebenzi uye ezingeni lomqondisi webhodi e-Emirates Airlines.
Imisebenzi e-Dubai - Yiba yedwa futhi uthole umsebenzi omusha!
Ngaphezu kwalokho, uma ufisa ukuhlala e-UAE, kunjalo inketho engcono kakhulu kubo bonke abavela ezweni ukugxila amakhono abo endawo. Okubandakanya izinsizakalo zezezimali, izindima zemikhakha yabaphathi abaphakathi kwezentengiso nokumaketha ngaphakathi kwe-Emirates. Singasho ukuthi izikhundla zobuchwepheshe bezokuthutha, abenzi bezokwakha kanye izimboni zokwakha kanye nangasogwini.
Manje sisebenzela izinkampani zikaHulumeni
Imisebenzi e-Dubai Ukuqashelwa okuthengayo
Izinkampani Zikahulumeni e-UAE kufanele zihlole
Izinkampani Zikahulumeni ekuqaleni zazisungule izinkampani ezinhle kakhulu e-Abu Dhabi nase Dubai City eminyakeni eyishumi eyedlule. Ngaphezu kwalokho, nabo ukunwebeka kuwo wonke amazwe e-GCC futhi enze amanye amabhizinisi lapho. Iningi lemisebenzi ekhangisiwe isuselwa ezinhlotsheni ezinjengeDoha, Dubai, ne Riyadh. Ngakho-ke zikhulu ezimbonini zezimali futhi zibaluleke kakhulu ku-UAE. Ngakho ngokufanayo uma ungumsebenzi osebenzayo wezemisebenzi yehhotela noma uchwepheshe wobunjiniyela obukhulu ku-oyili negesi. Ngaphezu kwalokho, ezokwakha, ezobunjiniyela, zamabhange, i-IT noma izimboni zezitolo. Kumele qala ukufuna umsebenzi lapho. Lezi zinkampani ezimangalisayo kufanelekile ukuzama.
Umsebenzi we-Expo 2020 e-Dubai
I-Expo 2020 ekukhanyeni kwe-UAE ekhulayo. Imakethi yemisebenzi kanye nentuthuko eDubai City. Empeleni, kufanele uhlole i-Middle East imakethe yomsebenzi ne-Expo 2020 kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza. Ngakolunye uhlangothi, ungaba yingxenye ye I-Expo 2020 Dubai Uhambo lomsebenzi lungabhekwa ububanzi obuningi bokuqashwa kwemisebenzi kanye namathuba okuzithandela.
Umsebenzi we-Expo uyatholakala kubantu abahlukile kanye nezikhulu ezihlakaniphile. Ukubeka ngenye indlela, uma ufuna ukujoyina iqembu le-Expo 2020 HR kufanele ube ngumuntu onomdlandla, kukhuthazwe kakhulu isikhundla esisha futhi waphefumulela umuntu ngeqembu lakho elisha.
Umsebenzi WezeMnyango Wezangaphakathi
Kukhona i-1,000 ngaphezulu UMnyango Wezangaphakathi Imisebenzi e Dubai ngenxa yakho ku-2018. Ingabe ungumqashi womsebenzi wokungena? Noma ifuna umsebenzi ophezulu wezinga eliphezulu ?. Inkonzo ye-Interior ingenye yezinto ezinhle kakhulu. Ngokuvamile, kunezikhundla ezingaphezu kwe-1,200 imisebenzi ezogcwaliswa eminyangweni ehlukahlukene e-Dubai City. Futhi eziningi zazo zikhokhwa kahle umkhakha wokuqashwa. Faka isicelo lapha uma ufuna ukusebenzela Imisebenzi kaHulumeni e-United Arab Emirates. Layisha Qalisa Ukuqalisa Kwakho: Faka i-Resume yakho futhi kule mikhakha. Bese thola okuningi mayelana nokuchitha isikhathi sakho eDubai City.
UMnyango Wezinsiza Zomphakathi wase-Dubai ufuna wena.
Dubai Government Yomsebenzi woMnyango Wezabasebenzi womele ukhetho ofanele. Kulokhu, inhloso yaleli thuba vumela ama-expats abe ngumuntu osesimweni esihle eDubai. UMasipala ubeka kuqala ukhetho lwakho lokujoyina ibhizinisi lomndeni futhi indlela engcono kakhulu yokuzibandakanya nabo ukwazi izinhloso eziyisisekelo ngalo Izindinganiso eyenziwe nguHulumeni waseDubai. Bambalwa kuphela okufanele bazi “Ukuziphendulela, Ukuncintisana, Ukusebenzisana okusha, iTransparency, kanye Nenjabulo".
Imisebenzi ehlobene noHulumeni udinga ukushaya ubuncane. Isibonelo, udinga ukuba unayo Imfundo ye-MBA yesikhala sobuchwepheshe.
Imisebenzi e-TECOM Group
I-TECOM Group inikeza uhla lwamathuba wokuqashwa ngaphakathi Dubai City, futhi le nkampani iyimali enkulu nje. Ngenhloso yokuthola abagqokiwe abasha kusuka kubantu abafanelekile ukuze bathole iziqu ezintsha. Iqembu leTecom liqasha abathengi kanye nabafuna imisebenzi yasendaweni ngesethi lamakhono elifanele. Umuntu ozongenela ukhetho neziqu zakhe kungaba lula ukuthola umsebenzi nabo.
Iqembu leTecom lisebenzisa ichibi lamathalente ahlukahlukene kusuka eNdiya, e-US, eCanada, e-Australia naseMiddle East. Ukubeka ngenye indlela, inkampani inika amandla abafuna umsebenzi ukucabanga ngendlela ehlukile ngesiko leDubai nezinsizakalo. Eminyakeni edlule ye-20, inkampani inikela ngokuncintisana inzuzo kuwo wonke umzingeli wemisebenzi. Ngokubheka kakhulu imakethe ekhula emhlabeni wonke eDubai. Inkampani yenza imali esebenzayo kakhulu emazweni we-GCC nezinkampani ezimangalisayo futhi uzoba ngumphathi uma ungumuntu ofanele.
Ngalesi sizathu, i-TECOM Group e2018-2019 idale utshalomali lwesikhathi eside. Ngokuvamile, izikhundla ezimbalwa ezikhona enkampanini zikulungele ukugcwaliswa. Lokhu kwaziwa kahle Idolobha laseDubai lisebenzisa imisebenzi ehlukahlukene kanye nokuchaza kuwo wonke amazinga e-Dubai. Ukufingqa kufanele uthumele i-vita vitae yakho ebuyekeziwe ukuze ubhekelwe ukuvulelwa kweTecom Group, ngicela Vakashela i-Dubai Holding Career ukulayisha imininingwane.
Imisebenzi e Dubai Ukuqashwa nge Dubai City Company. Inkampani enhle kunazo zonke abafuna umsebenzi !.
Imisebenzi e Dubai ne Dubai Dubai
Njengoba kunikezwe la maphuzu, sebenzisa ngokuqondile Dubai Holding bese uthole i- "Gov" uJob ne-Dubai Holding. Kufanele uthumele kabusha i-Resume yakho ku-intanethi ku-Dubai City Holding. Kuze kube manje, kunjalo inkampani engcono kakhulu yokusebenzela emazweni aseGulf. Okwamanje, ungaqala futhi ukusetha izexwayiso ezivela enkampanini yazo. Ekugcineni, thola isicelo somsebenzi kanye nemibuzo evela kubaqashi eDubai. Ukufinyelela kwabaqashi bakaHulumeni abaqondile eDubai. Ungalayisha ukubuyela kwakho kabusha kumakhasi kahulumeni we-UAE.
Siyakwamukela ku-Dubai Holding Group - Dubai Holding Imisebenzi e Dubai Ukuqashwa nge Dubai City Company.
Manje ungasebenzisa imisebenzi ne-Dubai Holding. Abaphathi banokuhlangenwe nakho okubanzi kwezemisebenzi ngephothifoliyo yezinkampani ezigxile emiphakathini yebhizinisi, izihambi, ezokuvakasha, izindawo zokuhlala nezokuxhumana nezokuxhumana ukufundisa umsebenzi ohlobene nemboni.
I-Dubai Holding selokhu i-2009 idlale indima enkulu ekwehlukaniseni umsebenzi wezomnotho kanye nowemisebenzi kuzimboni eziningi. Ngokubambisana, izinkampani zimelela ukubandakanyeka kuyo yonke imboni ye-12, ziqhubeka nokusekelwa futhi kukhula ukukhula okuzinzile, umnotho oholwa ngumbono omusha ngokuhambisana ne-United Arab Emirates Vision ye2021.
Uma ukhona ozobhapathizwa emhlabeni wonke futhi efuna umsebenzi okunikeza ithuba lokusebenza nemikhiqizo ehamba phambili yamazwe ngamazwe, ukuqeqeshwa okuphelele nokuthuthukiswa kwe Dubai Dubai Umsebenzi wokumaketha ungowakho. Qala umsebenzi wakho omusha futhi ube yingxenye ye imvelo esheshayo nenselele eDubai City. Thumela Qalisa kabusha ku-Dubai Holding.
Manje sesibhunga eDubai!
Enye into okufanele uyikhumbule ukuthi IDubai inezinga eliphansi kakhulu lobugebengu. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, Ngabe Ufuna Ukuthola a UJob e Dubai? yize lokhu kungaba iqiniso singasiza noma ngabe uyindala. Uqala umsebenzi omusha ku-The UAE!